Blu Studio 5.5 S ekwentị | Site na Linux
Blu Studio 5.5 S ekwentị
El Blu Studio 5.5 S ekwentị mkpanaaka O nwere atụmatụ magburu onwe ya na ezigbo nhazi, agbanyeghị ọ gaghị ekwe omume inweta n'ọtụtụ mba Latin America.
Blu Studio 5.5 S bụ otu nke kachasị mma Blu ntịDị ka aha ya na-ekwu, ọ nwere ihuenyo 5.5-anụ ọhịa na mkpebi nke pikselụ 540 x 960, nke dị ezigbo mma, ọ bụghị mma HD. N'ihe nhazi, anyị nwere Mediatek MT6582M quad-core 1.3Ghz processor, RAM bụ 1GB, ebe nchekwa dị n'ime 4GB gbasaa ruo 64GB. Njirimara ndị a dị oke mma mana enweghị atụnyere nke ekwentị dị elu.
Igwefoto kachasị bụ 8 megapixels, nke a na-eme ka foto dị mma, ebe igwefoto dị n'ihu bụ megapixels 2. Batrị ahụ bụ 2350 mAh, zuru oke iji ụbọchị niile. The gam akporo version bụ 4.2 upgradeable gam akporo 4.4 Kitkat.
El Blu Studio 5.5 S ekwentị mkpanaaka Ọ bụ ezi mmụba site na mbipute gara aga, Studio 5.5, mana nke a pụtara na ọ na-abịa na ọnụahịa dị elu karị, ọ dị nwute na ọ kabeghị aka n'ọtụtụ mba Latin America n'ihi ya enwere ike zụta ya site na ịntanetị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » ọtụtụ » Blu Studio 5.5 S ekwentị
Blu Studio 6 HD ekwentị